Holy Quran | Somalilandhorta | Page 16
Browse: Home / Holy Quran / Page 16
Posted on July 10, 2015RBC, Wararka Weheliye_Hotel_Muqdisho_Somalia Muqdisho [RBC Radio] Kow iyo tobon ruux oo ay ku jiraan afar ka mid ah dagaal-yahannadii weerarrada qaaday ayaa ku dhintay weerarro qaraxyo iyo kuwo toos ah oo caawa fiidkii lagu qaaday laba Hoteel oo ku yaalla Muqdisho,sida waxaa sheegay saraak ka tirsan booliska Soomaaliya oo la hadlay Raxanreeb. Weerarradan oo ahaa kuwo xooggan oo fiidkii hore ee caawa billowday waxaa lugu qaaday hoteelada Weheliye iyo Siyad oo ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Ciidamada ammaanka dowladda faderaalka ayaa markiiba gaaray labada hoteel ee la weerarray,waxaana sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka nabad-sugidd uu u sheegay Raxanreeb in la soo afjaray weerarkii ay al-Shabaab ku qaadeen hotel Weheliye oo ku yaal wadada Maka Al Mukaramah ee magaalada Muqdisho. Nuux Cismaan oo ka mid ah dad ku sugnaa meel ku dhow Hotel Wehliye ayaa u sheegay warbaahinta kooxaha hubeysan inay bambooyinka gacanta ku tureen iridda dambe ee Hoteelka, isla markaasna ay qaybta hore rasaas kasoo billaabay kooxo kale oo hubeysan, waxuuna tilmaamay in aad loo Argagaxay, dad badan wax ku noqdeen. “Saddex ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday waa la dilay, mid kalena wuu is-qarxiyay. Howlgalku weli Wuxuu ka socdaa Hoteel Weheliye oo ay Gudaha u Galeen. Sidoo kale waxaa dhintay lix qof oo shacab ah oo ku sugnaa gudaha iyo agagaarka Hoteel Weheliye, xilligaas oo la Afurayay ayna dad badan halkaas joogeen,” ayuu Wakaaladda ee Reuters u sheegay Cumar Cali oo Saraakiisha Booliiska Soomaaliya ka tirsan. Wararka soo kor-dhey waxaa ka mid ah isbitaalka Madiina mas’uuliyiinta ku sugan inay Raxanreeb u xaqiijiyen dhaawacyada 15 qof, Drs. Duniyo oo ah agaasimaha isbitaalka ayaa sida sheegtay. Mas’uuliyin la’layahay Warar ay heleyso Raxanreen waxa ay sheegayaan in la la’yahay qaar ka mid ah mas’uuliyiin dowladeed oo ku sugnaa mid ka mid ah hoteelada la qarxiyey. Dadka degan hoteelka Siyaad oo ku dhow xarunta madaxtooyadda Soomaaliya waxaa la sheegay inay u badan-yihiin siyaasiyin ka soo jeeda deegaannada Puntland,kuwaaso qarkood halka muddo ku sugnaa,balse lama shaacin magacyadda dadka ay wax soo gaareen. Al-Shabaab oo mas’uul ka ah weerarradan Qaraxyadda ayaa waxaa mas’uuliyiiyadooda sheegtey al-Shabaab , Sheekh Cabdicasiis Abuu Muscab oo ah afhayeenka hawl-galada ee al-Shabaab ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegey in ay iyagu ka dambeeyeen weerarada oo lagu qaaday labo hotel. “Gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyey ayaan ku dhufanay hotel Wehiye iyo Siyaad, dagaal-yahanadeena a gudaha ayay u galeen, dagaalkana waa uu socdaa” ayuu yiri Abuu Muscab. Weerarradan waxaa ay ku soo aadayan xilli lugu jiro bisha Ramadaan oo ah xilli ay weerarrada kordhiyaan al-Shabaab. Waxii ku soo kordha kala soco Raxanreeb ___ RBC Radio